Shiinaha Customized Belt qalab bac-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bacda qalabka > Bacda qalabka suunka
Xirmada qalabka guriga
(1) Suunka qalabku waa kordhinta dharka shaqada wuxuuna ku siinayaa caddy la qaadan karo oo kuu ogolaanaya inaad ku ag haysato agabka lagama maarmaanka ah. Markaad xiraneyso suunka qalabka, waxaad waqti badan ku qaadan doontaa shaqada iyo waqti ka yar.
(2) Qeexitaanka fudud ee suunka aaladda ugu fiican ayaa ah in la helo qalab kasta oo aad u baahan tahay. Qof walba, nooc kastoo shaqo ah oo ay qabtaan, xaaladdu way ka duwanaan doontaa. Kahor intaadan dooran suunka aaladda, waa inaad isku daydaa inta qalab ee suurtogalka ah oo aad tirisaa qalabka u baahan in la hagaajiyo, haddii suunka aad isku daydo uu la jaan qaadi karo liiskaaga. Liiskan waxaa ku jiri kara dubbayaal, cabirro cajalado ah, cabbiro xawaareyaal ah, heerarka torpedo, cirbadaha-sanka, qalabka wax lagu xardho, iwm. Sideed dareentaa markaad xiraneyso suunka aaladda? Sidee ayuu dareemaa marka la cadaadiyo? Haddii aad u isticmaali karto qalabka si aad u tijaabiso suunka aaladda, markaa waxaad heli doontaa isbarbardhigga dhabta ah ee dhabta ah. Fiiro gaar ah u xiirashada biraha ama qalabka laalaada mid aad u hooseeya ama aad u sarreeya.
(3) Adiga oo ah shaqaale gacan ku sameys ah goobta dhismaha, waxaad ogtahay inay aad muhiim u tahay inaad haysato suun qalab adag oo la isku halleyn karo, kaas oo kuu oggolaanaya inaad qaadatid inta badan qalabka aad u baahan tahay maalinta. Suumanka qalabka ayaa runtii kaa caawin kara inaad hagaajiso waxtarka iyo waxqabadka, maxaa yeelay aaladaha iyo qalabka wax lagu xidho ee aad u baahan tahay badanaa kama badna wareegga dhexdaada. Si kastaba ha noqotee, waxtarka ugu badan, waxaa jira laba qodob oo la tixgelinayo markaad dooranayso suunka qalabka xiga. Waxay yihiin naqshad, qalab, culeys iyo cabir.
(5) Naqshadaynta: Waxa ugu horreeya ee loo fiirsado. Naqshadaynta suunka aaladda waxay badanaa tixgelisaa koox dad ah, ha ahaato mid jilicsan, koronto yaqaan, nijaar, mashiinka qallalan, ama qof kale. Farqiga udhaxeeya ayaa noqon kara mid weyn, sababtoo ah jajabka wuxuu ubaahanyahay boorso weyn oo laalaada si uu u taageero miisaanka, halka korantada boorsadiisa laga yaabo inay kayartahay oo aysan ubaahnayn hangarasho. Sidaa darteed, hawsha ugu horreysa waa in la soo koobo suunka qalabka ugu fiican shaqada aad waqti badan ku qaadato inaad qabato. Ogaanshaha tan, berrinka waa la dhimi doonaa.
(6) Qalabka: Suumanka qalabka iyo boorsooyinka waxaa laga sameeyaa waxyaabo kala duwan, xulashada ugu muhiimsan waa maqaar, nayloon iyo shiraac. Maqaarku waa xulasho dhaqameed dad badan maxaa yeelay waa mid aad u adkaysi badan isla markaana si fiican loogu dhejin karo dhexda. Haddii shaqada tolidda ay tahay tan ugu sarreysa, waxaa jira warbixino badan oo ku saabsan bacaha maqaarka oo socon kara muddo tobanaan sano ah. Waxay kaloo xamili karaan xadgudubyada ugu daran. Faa’iido darrada kaliya ee maqaarku leeyahay waa qiimaha iyo miisaanka.
(7) Suumanka qalabka nayloonku sidoo kale way culus yihiin wayna ka fudud karaan suumanka. Marnaba ma noqon karaan kuwo u adkaysata sida maqaarka, mana sii dheeraan doonaan, laakiin qiimaha marwalba wuu ka jaban yahay. Haddii aad u baahan tahay shaqo adag, laakiin ku jirta miisaaniyadda suunka aaladda, nayloonku waa xalka.
(8) Canvas wuxuu noqon karaa midka ugu yar ee laga isticmaalo agabkan. Waajibaadkeedu waa ka fudud yahay, waana midda ugu cadcad saddexda iyo kan ugu jaban. Shaqaalaha aan u baahnayn qalab badan ama dhejiyeyaal, tani waxay u noqon doontaa xal wanaagsan.
(9) Qaar badan oo shaqaalaha dhismaha ka mid ahi waxay isku arkaan inay u kala wareegaan howlaha si joogto ah iyadoo lagu saleynayo shaqada ay qabanayaan. Xaaladdan oo kale, waxa aan doonayo in aan sameeyo ayaa ah in la helo xirmo dhammeystiran oo boorsooyin ah oo cabirkoodu dhan yahay, kuwaas oo la faaruqi karo marka aadan u baahnayn qalab iyo dhejisyo badan. Marna kama tagi kartid boos badan boorsada, laakiin marwalba waad soo qaadan kartaa alaabada si loo yareeyo miisaanka.
2.Xirmada qalabka guriga product parameters (specifications)
1680D maro Oxford ballistic ah
Dhererka 55cm X ballaca 12.5cm
4. Baakadaha iyo keenida qalabka guryaha
(2) Cabbirka baakadka caadiga ah: dhererka 55cm X ballaca 12.5cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
Calaamadaha kulul: Boorsada qalabka suunka, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la qaabeeyey, qiimaha, oraahda, keydka